Imiklomelo & Okufeziwe - Izinsizakalo Zomthetho ZasePrairie
Eminyakeni esanda kwedlula, siye sahlonishwa ngokuzinikela kwethu ekwenzeni kahle ezinsizakalweni kanye nobuchule ekulethweni kwezinsizakalo. Nazi ezimbalwa:
- I-Illinois Association of Area Agencies on Aging - Sid Granet Award for innovations in service service.
- I-Retirement Research Foundation Encore Award yokwenza kahle.
- Umklomelo Wombusi Wokuphumelela Okuhlukile.
- IShriver National Center on Poverty Law 2008 Housing Justice Award.
- "Insizakalo eyisibonelo kulabo abahlukunyezwe ubugebengu" (Victim Justice Coalition, 1997)
- Partners in Peace Award (Community Crisis Center 1995 no 2006)
- Umklomelo Kazwelonke We-Pro Bono Partner wokubandakanyeka kwabameli bezinkampani ezinsizakalweni zabesifazane abahola kancane
(Inhlangano Yabeluleki Benkampani 2004)
- Isilinganiso "sokusebenza kahle kakhulu" (UMnyango Wezindlu kanye Nentuthuko Emadolobheni e-US (unyaka ngamunye 2004 kuya ku-2009)
Izinsizakalo Zomthetho ZasePrairie zivikela izinsiza zosizo nempilo yengane
UJoan *, owahlukaniswa nowayengumyeni wakhe ngenxa yodlame lwasekhaya, wathola umsebenzi ebhange, kodwa waphelelwa umsebenzi lapho ukulimala kwamshiya engakwazi ukusebenza. Wayezondla yena nezingane ezine ngokukhubazeka kwezenhlalakahle, imihlomulo ye-SSI, nemali encane yosizo lokuqasha edolobheni ayehlala kulo. UJoan akakaze athole ukuxhaswa kwezingane futhi azi ukuthi mancane amathuba okuthi akuthole. Ngenkathi efika ePrairie State, uComEd noNICOR babenyuse kakhulu izikweletu zakhe ngokumkhokhisa ngokungemthetho ngezinsizakusebenza ezazisetshenziswa ngumyeni wakhe wangaphambili ngendawo yokuhlala esehlukanisiwe. Lapho engakwazi ukukhokha lezi zikhokhelo zombuso, inkampani kagesi yasabisa ngokunqamula le nkonzo yayo. Enye yezingane zikaJoan yayinesifuba somoya futhi yayidinga i-nebulizer, edinga ugesi. IComEd ngeke iyamukele incwadi kadokotela yokugcina ugesi ngaphandle uma uJoan evuma ukukhokha u- $ 4 ngokushesha futhi wavuma ukukhokha imali esele ezinsukwini ezingama-500. Abameli basePrairie State basize uJoan nezingane zakhe ukuba bahlale kwakhe futhi bagweme ukunqanyulwa izinsiza zakhe.
Izinsizakalo Zomthetho ZasePrairie zandisa ngempumelelo izinzuzo Zokuphepha Komphakathi zikaMaria *
UMaria wayemaphakathi neminyaka engama-40 lapho efika ePrairie State, kodwa wayekade elwa nokukhubazeka, njenge-schizophrenia, kusukela maphakathi neminyaka engama-20. Wayethola imihlomulo yokukhubazeka koMphakathi ngenxa yalokho kukhubazeka. UMaria bekufanele athole izinzuzo ezengeziwe ezincike kuncike emlandweni womsebenzi kayise ngoba ukukhubazeka kwakhe kwaqala ngaphambi kokuba abe neminyaka engu-22. Noma kunjalo, iSocial Security Administration yasenqaba isicelo sakhe salezi zinzuzo ezingeziwe. Ekulalelweni kwezokuphatha, abameli boMbuso wasePrairie kwakudingeka bafakazele ukuthi uMaria ukhubazekile ngaphambi kokuba abe neminyaka engama-22 nokuthi umlando wakhe wokusebenza omkhawulo awuzange umenze angafaneleki ukuthola izinzuzo zokuncika kwi-akhawunti kayise. IPrairie State yethulwe ubufakazi futhi waqinisekisa ijaji, ngakho-ke uMaria wafanelekela izinzuzo zokuncika.
Izinsizakalo Zomthetho ZasePrairie zivimbela ukukhishwa kwabantu ngokuthola indawo yokuhlala efanelekile ngaphansi koMthetho Wezindlu Ezifanele
ULinda * wayehlala esakhiweni esakhiwe ngamaphrojekthi esigabeni 8 iminyaka engaphezu kwengu-20. Ngenkathi elwa nesimo se-bipolar esingalashwa, waqala ukukhombisa isimilo esixakile nesicasulayo egcekeni. Lokhu kuholele ekutheni umnikazi womuzi kaLinda afake isimangalo sokuthi amxoshe, amsongele ngokumenza angabi nakhaya. Abameli basePrairie State bacele indawo yokuhlala efanelekile yokukhubazeka kwakhe - ukuhlehlisa ukuqhubeka kokukhishwa ngesikhathi uLinda eya esikhungweni sezokwelapha iziguli ukuze kuzinze isimo sakhe futhi alandelwe ngemithi nokwelulekwa. ULinda wahlehliswa ngalesi sizathu, umninindlu waqapha inqubekela phambili kaLinda, kwathi ngokuhamba kwesikhathi walichitha icala lokukhishwa kwabantu.
I-Prairie State Legal Services isindisa izinzuzo zezindlu ezixhaswayo zikaLawrence
Abaphathi bezezindlu basinqamula ivawusha Yokukhetha Ezezindlu yendoda eneminyaka engu-70 ubudala, uLawrence. * Ivawusha yanika uLawrence ithuba lokuhlala efulethini ayengakwazi ukulithenga. U-Lawrence wahlinzwa ngomdlavuza womphimbo futhi wayelashwa ngamakhemikhali ngesikhathi uMnyango wezeziNdlu unqamula ivawusha yakhe. Abaphathi bezezindlu bathathe lesi sinyathelo ngoba uLawrence wehlulekile ukubika njengemali yempesheni encane engu- $ 62 ngenyanga ayithola iminyaka emihlanu, nokuyinto ethinte inani lerenti ayikhokhiswayo. U-Lawrence wayekholelwa ngephutha ukuthi phambilini wayebike le mali njengengxenye yemali ayitholayo kwi-Social Security. Kodwa-ke, abakwaZindlu bakubize ngokwehluleka ngenhloso ukubika imali engenayo. AbakwaPrairie State Legal Services bamele uLawrence ngesikhathi kulalelwa icala lakhe lapho edluliswa icala futhi wakufakazela ngempumelelo ukuthi uLawrence wenze iphutha, nokungelona elenhloso. Ngokuya ngeminyaka nezinselelo zezempilo zikaLawrence, iPrairie State icele indawo yokuhlala efanelekile ukuze uLawrence athole usizo ngokubika ekunqunyweni kabusha kwesikhathi esizayo kokufaneleka kwevawusha yakhe. Isinqumo sokulalelwa kwecala besivuna ngokuphelele uLawrence, siguqula isinqumo sokuqala sokunqamula ivawusha yakhe, futhi savumela uLawrence ukuthi akhokhe umehluko werenti ngohlelo lokukhokha. Lokhu kwavumela uLawrence ukuthi anakekele izindlu zakhe zomxhaso futhi agweme ukungabi nakhaya.
* Amagama ashintshiwe ukuvikela ubunikazi bamakhasimende ethu nokugcina okuyimfihlo.
Ubuwazi ukuthi umuntu waseMelika oyedwa kwabangu-1 (2%) abahola kancane abahlangabezane nenkinga bathi lezi zinkinga zibe nomthelela omkhulu ezimpilweni zabo - ngemiphumela ethinta ezezimali zabo, impilo yengqondo, impilo yomzimba kanye nokuphepha, kanye nobudlelwano. #fridayfact Umthombo: Umbiko we-LSC 2022 Justice Gap	... Buka OkuningiBheka okuncane